Mufananidzo waJesu Wemupfumi naRazaro | Upenyu hwaJesu
Jesu achangobva kupa vadzidzi vake mazano anobatsira panyaya yekushandisa pfuma. Asi vadzidzi vake handivo voga vari kuteerera zvaari kutaura. VaFarisi varipowo uye vanofanira kunyatsobatisisa zano rapiwa naJesu. Nechikonzero chei? Nekuti “vanhu vanoda mari.” Pavanonzwa zviri kutaurwa naJesu, ‘vanotanga kumuseka’ vachimunyomba.—Ruka 15:2; 16:13, 14.
Asi Jesu haana kana basa nazvo. Anoti kwavari: “Ndimi munozviti makarurama pamberi pevanhu, asi Mwari anoziva mwoyo yenyu; nokuti chinhu chakakwirira pakati pevanhu chinhu chinonyangadza pamberi paMwari.”—Ruka 16:15.
VaFarisi vava nenguva vachionekwa sevanhu ‘vakakwirira’ asi iye zvino zvinhu zvava kufanira kuchinja. Vanhu ava vakakwirira pakuti vane pfuma yenyika, vane simba mune zvematongerwo enyika uye zvokunamata, asi iye zvino vava kufanira kuderedzwa. Ukuwo vaya vakaderera vanoziva kuti vanoda kubatsirwa naMwari, vava kufanira kukwidziridzwa. Jesu anobudisa pachena kuti pane kuchinja kwakakura kuri kuitika paanoti:
“Mutemo neZvakanyorwa nevaprofita zvaivapo kusvikira pana Johani. Kubvira panguva iyoyo umambo hwaMwari huri kuziviswa semashoko akanaka, uye vanhu vemarudzi ose vari kuhuvavarira. Chokwadi, zviri nyore kuti denga nenyika zvipfuure pane kuti rutivi rumwe chete rwebhii roMutemo rurege kuzadzika.” (Ruka 3:18; 16:16, 17) Mashoko aJesu anoratidza sei kuti pane kuchinja kuri kuitika?
Vatungamiriri vechitendero chechiJudha vanozvikudza vachizviti vanonyatsotevera Mutemo waMosesi. Yeuka kuti Jesu paakaita kuti mumwe murume anga ari bofu aone, vaFarisi vakataura vachizvitutumadza vachiti: “Isu tiri vadzidzi vaMosesi. Tinoziva kuti Mwari akataura naMosesi.” (Johani 9:13, 28, 29) Chimwe chinangwa cheMutemo waMosesi chaiva chekutungamirira vanhu kuna Mesiya, kureva Jesu. Johani Mubhabhatidzi akataura kuti Jesu aiva Gwayana raMwari. (Johani 1:29-34) Kubvira pakatanga ushumiri hwaJohani, vaJudha vanozvininipisa, kunyanya varombo, vari kunzwa ‘nezveUmambo hwaMwari.’ Aya “mashoko akanaka” zvechokwadi kune vose vanoda kuva pasi peUmambo hwaMwari uye vanoda kubatsirwa nahwo.
Mutemo waMosesi uri kuzadziswa pakuti watungamirira vanhu kuna Mesiya, saka vanhu vachange vasisasungirwi kuuchengeta. Somuenzaniso, Mutemo waibvumira vanhu kuti varambane nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, asi iye zvino Jesu anotsanangura kuti “munhu wose anoramba mudzimai wake, oroora mumwe anoita upombwe, uye anoroora mudzimai akarambwa nomurume anoita upombwe.” (Ruka 16:18) Mashoko aJesu anotsamwisa vaFarisi avo vane katsika kekungogadza tumitemo twakawandisa.
Jesu anobva atanga kutaura mufananidzo unoratidza kuti kuchinja kuri kuitika apa kwakakura zvakadini. Mufananidzo wacho ndewevarume vaviri avo vane mamiriro ezvinhu anongoerekana achinja zvinoshamisa. Kuti unzwisise mufananidzo uyu, yeuka kuti vamwe vevanhu vari kuunzwa uchitaurwa vaFarisi, avo vanoda mari uye vanoonekwa nevanhu sevakakwirira.
Jesu anoti: “Mumwe murume akanga akapfuma, uye aigara achipfeka nguo dzepepuru nerineni, achifara zuva nezuva nezvinhu zvoumbozha. Asi mumwe mupemhi ainzi Razaro aigara achiiswa pagedhi rake, azere nemaronda uye achida kuguta nezvinhu zvaidonha patafura yomupfumi. Chokwadi, nembwawo dzaiuya dzonanzva maronda ake.”—Ruka 16:19-21.
VaFarisi vanhu vanoda mari saka zviri pachena kuti ndivo vari kufananidzwa ‘nemurume akanga akapfuma.’ Vatungamiriri vechitendero chechiJudha ava vanofarirawo kupfeka nguo dzinodhura dzokushamisira. Kupfuma kwavo hakusi pamari yavangava nayo chete asi zvinzvimbo zvavainazvo nemikana isina vamwe yavainayo, zvinoitawo kuti vaite sevakapfuma. Kufananidzwa kwavari kuitwa nemurume akapfeka nguo dzepepuru kunomiririra zvinzvimbo zvepamusoro zvavainazvo uye nguo chena dzerineni dzinoratidza kuti vanhu vanozviita vakarurama.—Dhanieri 5:7.
Vatungamiriri ava vakapfuma, vanozvikudza, vanoona sei varombo, kana kuti vanhu vakaderera? Vanovatsvinyira neshoko rokuti ‛am ha·’aʹrets, kana kuti vanhu vepasi (venyika), uye vanovaona sevanhu vasingazive Mutemo, vasingatokodzeri kuudzidziswa. (Johani 7:49) Izvi zvinoenderana nezvaiitika ‘kumupemhi ainzi Razaro’ uyo aidya “zvinhu zvaidonha patafura yomupfumi.” Kufanana naRazaro akazara nemaronda, vanhu ava vakaderera vanotarisirwa pasi, vachitoonekwa sevasingagamuchirwi naMwari.
Mamiriro ezvinhu iwayo anosiririsa atova nenguva aripo, asi Jesu anoziva kuti yava nguva yekuti zvinhu zvichichinja chaizvo kuvanhu vakaita semupfumi uye vakaita saRazaro.
MAMIRIRO EZVINHU EMUPFUMI NEARAZARO ANOCHINJA
Jesu anoenderera mberi achitsanangura kuchinja kukuru kunozoitika. Anoti: “Zvino nokufamba kwenguva mupemhi wacho akafa, akaendeswa nengirozi panzvimbo yepachipfuva chaAbrahamu. Uyewo, mupfumi akafa, akavigwa. Ari muHadhesi [muGuva] akatarira kumusoro, achirwadziwa, akaona Abrahamu ari kure uye Razaro ari panzvimbo yepachipfuva chake.”—Ruka 16:22, 23.
Vanhu vari kuteerera Jesu vanoziva kuti Abrahamu akafa kare kare uye ari muguva. Magwaro anoratidza pachena kuti hapana munhu ari muSheori kana kuti muguva anokwanisa kuona kana kutaura, kusanganisira iyewo Abrahamu. (Muparidzi 9:5, 10) Saka vatungamiriri vechitendero ava vanofunga kuti Jesu ari kurevei nemufananidzo wake? Angave ari kuti kudii nezvevanhu vakaderera uye nezvevatungamiriri vechitendero vanoda mari?
Jesu aratidza kuti zvinhu zvachinja paataura kuti ‘Mutemo neZvakanyorwa nevaprofita zvaivapo kusvikira pana Johani Mubhabhatidzi, asi kubvira panguva iyoyo umambo hwaMwari huri kuziviswa semashoko akanaka.’ Saka kuparidza kwakaitwa naJohani uye kuri kuitwa naJesu Kristu, ndiko kwaita kuti mupfumi naRazaro vaite sevafa, izvo zvinofananidzira kuchinja kwaita mamiriro ezvinhu avanga vari maari panyaya dzokunamata Mwari.
Vanhu vakawanda, kunyanya varombo, vava nenguva vachishaiwa dzidziso dzinosimbisa pakunamata. Asi vava kubatsirwa uye vava kuteerera mashoko eUmambo akadzidziswa naJohani Mubhabhatidzi uye ari kudzidziswa naJesu. Izvi zvisati zvaitika vaingopona nezvinhu zvishomanana “zvaidonha patafura” yezvinhu zvekunamata yevatungamiriri vechitendero. Asi iye zvino vava kuwana chokwadi chemuMagwaro, kunyanya kubva pazvinhu zvakanaka zviri kutsanangurwa naJesu. Vava kufarirwa naJehovha Mwari.
Asi vaya vakapfuma uye vanotungamirira chitendero vari kuramba kugamuchira mashoko eUmambo akaziviswa naJohani uye ari kuparidzwa naJesu munyika yose. (Mateu 3:1, 2; 4:17) Vari kutogumburwa uye vari kurwadziwa nemashoko iwayo ekuti Mwari achaita kuti pave nekuparadzwa kwakaita sekunoitwa nemoto. (Mateu 3:7-12) Vatungamiriri vechitendero ava vanoda mari vari kungoti dai Jesu nevadzidzi vake varega kuparidza shoko raMwari. Vatungamiriri ava vakafanana nemupfumi wemumufananidzo waJesu, uyo anoti: “Baba Abrahamu, ndinzwireiwo ngoni, mutume Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwangu, nokuti ndiri kurwadziwa mumirazvo iyi yomoto.”—Ruka 16:24.
Asi izvozvo hazvisi kuzoitika. Vatungamiriri vechitendero vakawanda havasi kuzochinja. Vakaramba kuteerera ‘zvakanyorwa naMosesi uye zvakanyorwa nevaprofita’ izvo zvaifanira kuvaita kuti vagamuchire Jesu saMesiya uye Mambo akagadzwa naMwari. (Ruka 16:29, 31; VaGaratiya 3:24) Uye havasi kuzvininipisa kuti vatevedzere zviri kuitwa nevarombo vari kugamuchira Jesu uye vava kufarirwa naMwari. Kana vari vadzidzi vaJesu havasi kuzorega kuparidza kana kurerutsa chokwadi kuti vangofadza kana kuti vazorodze vatungamiriri ava vechitendero vari kurwadziwa. Mafungiro avo aya anoratidzwa naJesu mumufananidzo wake, paanotaura mashoko anoudzwa mupfumi ‘naBaba Abrahamu’ okuti:
“Mwana, yeuka kuti wakagamuchira zvinhu zvako zvakanaka muupenyu hwako hwose zvakakwana, asi Razaro akagamuchirawo zvinhu zvinokuvadza. Zvisinei, iye zvino agere zvakanaka kuno asi iwe uri kurwadziwa. Uye pasinei nezvinhu izvi zvose, pane mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu nemi, zvokuti vanoda kuyambukira kwamuri vachibva kuno havagoni, uyewo vanhu havangayambukiri kwatiri vachibva ikoko.”—Ruka 16:25, 26.
Kuchinja kwakadai kwakanyatsokodzera uye kwakarurama zvechokwadi! Kunoita kuti zvinhu zvichinje kuvatungamiriri vechitendero vanozvikudza uye kuvanhu vanozvininipisa vanogamuchira joko raJesu uye vava kuzorodzwa nekuwana zvokudya zvinosimbisa pakunamata. (Mateu 11:28-30) Kuchinja uku kuchatozonyatsooneka mwedzi mishomanana iri kutevera pachatsiviwa sungano yeMutemo nesungano itsva. (Jeremiya 31:31-33; VaKorose 2:14; VaHebheru 8:7-13) Mwari paachadurura mudzimu mutsvene wake paPendekosti ya33 C.E., zvichabva zvanyatsobuda pachena kuti vadzidzi vaJesu ndivo vanofarirwa naMwari, kwete vaFarisi nevatsigiri vavo.
Mamiriro ezvinhu evatungamiriri vechitendero chechiJudha akasiyana papi neevanhu vakaderera?
Sezvinoratidzwa naJesu, chii chinochinja kubvira pakatanga kuparidza Johani?
Mumufananidzo waJesu, ndiani anofananidzwa nemupfumi uye ndiani anofananidzwa naRazaro?
Jesu anoratidza sei kuti zvinhu zvachinja?
Mashoko akaparidzwa naJohani neari kuparidzwa naJesu anoita kuti vatungamiriri vechitendero vanzwe sei, uye Jesu anopa mufananidzo wekutii achiratidza izvi?
Vatungamiriri vechitendero vari kuda kuti chii chiitike, asi nei izvozvo zvisiri kuzoitika?
Musiyano uri pakati pevatungamiriri vechitendero nevadzidzi vaJesu uchanyatsooneka riini?